musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Malta Kuputsa Nhau » Kusimbisa kufamba-kwoushamwari kufamba kune zero
Kuputsa Nhau dzeEurope • Malta Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Mamiriro ekunze-ane hushamwari kuenda kuZero
NeEuropean semutungamiri wepasi rese muTravel & Tourism, SUNx Malta inozivisa zvirongwa zviviri zvekubatsira kupora denda munzvimbo iyi uye kupindura Munyori Mukuru weUN Guterres anodaidzira kuti kushanya kwepashure kwedenda kuve Kunogadzikana uye Kunze Kwemamiriro ekunze.
SUNx Malta iri kushanda kusimbisa mamiriro ekunze eEuropean.
Chekutanga ndeye SDG 17 Memorandum yeKunzwisisa pamwe neEuropean Travel Commission (ETC), inomiririra National Tourism Organisations (NTOs) yeEurope, kuti vashande pamwe chete kuvaka Climate Friendly Travel kuva nhengo dzeETC zvirongwa zvehurongwa.
Izvi zvichavabatsira kukoshesa kusimudzira kusimudzira kweEurope senzvimbo yekushanya.
Izvi zvinosanganisirawo kushanda pamwechete zvakananga kuburikidza ne SUNx Mamiriro ekunze Shamwari Yekufamba Registry ye2050 Ambitions kune batsira maEuropean NTO kufambira mberi kwavo nzira dzeKusimudzira Kwemamiriro ekunze
Chechipiri kugadzwa kwe "Yakasimba YeMamiriro ekunze Mumiriri - yeEurope" kuti iwedzere kutarisisa kune inokurumidza kuvandudzwa marongero, mitemo nemasangano mudunhu uye kubatsira Kufamba & Tourism Nharaunda uye Makambani zvirinani kuita neCFT Registry. Cinzia De Marzo, uyo achangodomwa semumiriri weEU Mamiriro ekunze, gweta rine ruzivo, akashanda mukati meEuropean Commission segweta, anotarisira European Tourism Indicators of Sustainability (ETIS) anounza hupfumi hwezivo nehunyanzvi ku chinzvimbo. Mubasa rake idzva achashanda pamwe nemasangano eEU kutsigira Green Deal muKufamba & Tourism Sector.
Iye achabatanawo nevamiriri veEuropean pamwe neUNFCCC inoenderana SUNx Malta CFT Registry uye akapedza kudzidza Strong Climate Champions, kubatsira kusimbisa Mamiriro ekunze Anoshamwaridzana Ekufamba zvirongwa.
Muzvinafundo Geoffrey Lipman SUNx Malta President vakati: "Tinofara kuzivisa nezvechiitiko chitsva ichi kuEurope, semumwe wevatungamiriri vezvematongerwo enyika nekusimudzira hupfumi. Izvo zvakakosha zvakanyanya kuti isu titsigire ETC iyo ine hutungamiriri hwakareba mukusvibisa chikamu. Cinzia anounza rimwe simba rinokosha kusimba redu. ”
Eduardo Santander, Executive Director weETC vakati: "Kuderedza shanduko yemamiriro ekunze ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvevamiriri veETC sechikamu chekudzora nekusvibisa chikamu chevashanyi zvichitevera COVID-19. Isu tinofara kubatana pamwe SUNx Malta uye ndinotenda kuti Climate Friendly Travel Registry chishandiso chakakodzera nguva uye chinobatsira icho chinotsigira maEuropean NTO mukuzadzisa zvinangwa zvavo zvegreen. ”
SUNx Malta haisi yebatsiro, EU yakavakirwa, sangano, rakabatana nehurumende yeMalta iyo yakagadzira yakasarudzika, yakachipa mutengo, sisitimu yekubatsira makambani Ekufamba & Ekushanya nenharaunda kushandukira kuNew Climate Economy. Iyo SUNx Malta "Girini & Yakachena, Yemamiriro ekunze Yehukama Yekufamba Sisitimu" ndeye Chiito uye Dzidzo yakanangidzirwa - kutsigira makambani anhasi nenharaunda kuunza zvido zvavo zvakaziviswa uye kukurudzira vatungamiriri vechidiki vemangwana kuti vagadzirire mabasa anokomborera mudunhu rese.
Kuti uwane rumwe ruzivo rwenhau, mifananidzo, kana kuronga kubvunzurudza naPurofesa Lipman, bata Olly Wheatcroft, Programme Manager SUNx Malta pa: [email inodzivirirwa]